Sinikezela ngezisombululo ezisebenzayo kwicandelo lamanzi
Uhlobo olutsha lweZinto ezinyibilikayo kunye neDesktop, MDD,
I-BIC iphuhlise uhlobo olutsha lwesixhobo sokunyibilika esincinci esinyibilikayo kunye nesixhobo esilahlayo. Nasebusika obubandayo obugqithisileyo, ayizukubumba umaleko womkhenkce, osombulula ngokufanelekileyo ingxaki engumkhenkce phambi kwelothe. Okwangoku, esi sixhobo sinokusetyenziselwa i-BIC's HED (Hy ...
Ukuphumelela iprojekthi entsha, ukuqaqambisa okusha koyilo
Kutshanje, i-BIC iphumelele ukubiza ixabiso kumadama amabini e-hydraulic elevator kwiPhondo laseJilin, China. I-HED enye ine-170m ubude kunye ne-2.5m ukuphakama; enye i-HED ine-186m ubude kunye ne-2.5m ukuphakama. Ii-HEDs zombini zenzelwe ubume beedolophu ngobunewunewu bokukhanya. Olunye uphawu lokuqaqanjelwa kwezi zimbini ze-hydraulic ele ...
Iprojekthi yeDama eliPhakanyisiweyo elenziwe lula eLishu
Ngo-Okthobha u-2020, inkampani yethu ithathe inxaxheba kuphuhliso lobunjineli oluzinzileyo lweProjekthi yeDama eliPhakanyisiweyo (SED) kwicandelo lasezidolophini laseZhaosutai River kwiLishu County. Le projekthi inee-SED ezintlanu, enye yazo ili-10m ubude kunye ne-1.5m ukuphakama, inepaneli enye ye-3.33W * 1.5mH, ...
U-Xi uthumela umyalezo wokumakisha ikhulu leminyaka lokuzalwa kuka-Bangladeshi, isikhumbuzo seminyaka engama-50 yenkululeko
Umongameli wase-China u-Xi Jinping uthumela umyalezo wevidiyo kumnyhadala obubanjelwe e-Bangladesh kukhunjulwa ikhulu leminyaka lokuzalwa kukayise u-Sheikh Mujibur Rahman, ekwabhiyozela isikhumbuzo seminyaka engama-50 yenkululeko yeli lizwe nge-17 ka-Matshi 2021. ...
Usuku oluMnandi lwaBasetyhini lwaMazwe ngaMazwe！
IWebinar kwiDama leHydraulic Elevator Dam, HED） kunye neDama eliPhakanyisiweyo elenziwe lula （SED）
Nge-7 kaFebruwari, isemina ebalulekileyo yokunxibelelana kwezobuchwephesha kwi-intanethi yabanjwa ngempumelelo phakathi kwenkampani yethu kunye neBarind Multipurpose Development Authority, ngokubhekisele kwidama lesinyusi samanzi kunye netekhnoloji eyenziwe lula yedatha. Usihlalo, umlawuli olawulayo kunye neenjineli ezingaphezu kwama-50 ...
Indibaniselwano yedama le-hydraulic ikheshi kunye nomthombo womculo
Kutshanje, inkampani yethu yenze inkqubela phambili enkulu kuphuhliso lomthombo wamanzi ohambelana nedama yesinyusi esihamba ngesanti kubunzulu baphantsi. Inokufakwa kunye nomzimba wesango. Imithombo kunye nezibane zilawulwa ngumqondiso wokudlala umculo. Ayisiyomthendeleko obonakalayo kuphela, kodwa ikwayiyo nokuzonwabisa okunamandla ....
Umsitho wokumiselwa kweprojekthi ye-HED yokulinga e-Bangladesh
Umsitho wokumiselwa kwedama le-Bhara Shanka hydraulic elevator labanjwa nge-Okthobha ye-11, 2020. Umphathiswa Wezolimo kunye noMphathiswa Wezomhlaba, Unobhala weSebe lezoLimo, uSihlalo we-Bangladesh yeQela loPhuhliso lwezoLimo. KwiBeijing IWHR Co ...
Nge-Juni 2019 utyelelo lomqeshi kwindawo ye-Bhora HED Pilot
Ukulandela ukufakelwa kugqitywe ngempumelelo ngoJuni, uMqeshi uqinisekisile inkqubela phambili yesiza kwaye wavakalisa ukoneliseka kwakhe kukuqhutywa kwetyala (phantsi kwesiqingatha seResvovo Capacity) yedama leHED. Iprojekhthi iya kunikezelwa emva kwexesha lemvula emva kokuqhutywa kwetyala kweHED (phantsi kweReservoirCapacity epheleleyo).
NgoJulayi 2019, undwendwelo lwe-BIC kwi-Ofisi yoMphathiswa Wezolimo kunye noNkcenkceshelo lweMyanmar
Kwasekuqaleni kukaJulayi, uGeneral Chen wakhokela iqela elinye leenjineli ze-BIC ukuba lityelele usekela-mphathiswa kunye nomlawuli we-Ministry of Agriculture and Irrigation eMyanmar. La macala mabini axoxe ngokuqinisa ukomeleza intsebenziswano kwicandelo lobutyebi bamanzi. Iinjineli zethu zazisa itekhnoloji entsha hydraulic ...
kunye nomda weshishini obandakanya ukucebisana ngobugcisa, inkonzo kunye nokusetyenziswa; uphuhliso lwemveliso, imveliso, ukuthengisa nokunyusa, kunye nolwakhiwo lweeprojekthi ezifanelekileyo; kunye nokuthengisa kunye nearhente yetekhnoloji kunye neemveliso.
Uhlobo olutsha lweMeltting & Deicing Device ...
Xi uthumela umyalezo wokumakisha ikhulu leminyaka yeBhan ...